I-Energizer Power Max P18K Pop iyasilela ngephulo layo le-Indiegogo | Zonke iinkonzo ze-intanethi
I-Energizer wayengomnye wabalinganiswa abaphambili kwi-MWC 2019 edlulileyo. Inkampani isishiye neefowuni ezininzi kumnyhadala obuse-Barcelona, zizonke ziifowuni ezingama-26 ezahlukeneyo. Nangona bekukho ifowuni enye ebime ngaphezulu kwezinye, eyiye Ipop yaseP18K, ifowuni evelele ukufika kunye nebhetri ye-18.000 mAh umthamo. Ukuba ngale ndlela ifowuni ibhetri inkulu kwimarike.
Emva kokubonisa ngokusesikweni ifowuni kwi-MWC 2019, inkampani yathatha Isigqibo sokuqala iphulo kwi-Indiegogo. Ke ukuveliswa kwale fowuni kwakuza kuxhaswa ngale ndlela. Nangona eli phulo liye laziwa ngokungaphumeleli kwe-Energizer. Abakafikeleli kwinjongo echaziweyo. Kwaye khange basondele.
I-Avenir Telecom yinkampani enelayisensi yegama le-Energizer. Inkampani ibinezicwangciso yazisa le fowuni ngokusemthethweni oku kuwa, ngenyanga ka-Okthobha njengomhla wokuqala. Kungenxa yoko le nto bathathe isigqibo sokuqala eli phulo lokuxhasa ngemali kwi-Indiegogo. Ke abasebenzisi abanomdla banokugcina ifowuni malunga ne- $ 549.
Ngale phulo, inkampani ibinayo ithemba lokunyusa i-1,2 yezigidi zeedola, ukuze imveliso yenziwe. Kuba ifemu yayijolise ekuveliseni le fowuni. Kubekwe inyanga yexesha ukuba eli phulo ligqitywe, liphele ngale ndlela. Kodwa iziphumo khange zibe yile nto ibilindelwe yinkampani. Kuba iye yasilela.
Kuphela yi- $ 15.005 kuphela ephakanyisiweyo kwimveliso ye-Energizer Power Max P18K Pop. Inani eliphantsi ngokwenene, eli-1% nje yenjongo eyayimiselwe yinkampani ukuqala ukuveliswa kwesi sixhobo. Oko kucacisa ukuba le nkqubo khange ibasebenzele. Ukongeza koku akubikho mdla mkhulu kubathengi. Nangona kukho izinto ezininzi ekufuneka zithathelwe ingqalelo.
UMeizu CEO uthi iMeizu Zero yayililinge lokuthengisa
Kutheni le nto ukuzama kwe-Energizer kusilele?
Abanye bayabona eli phulo le-Energizer kwi-Indiegogo njengephulo lokuthengisa, into exhaphakileyo kule webhusayithi. Umzekelo wakutshanje malunga noku Zero Meizu, othe wadlula kwimeko efanayo. Emva kwephulo elalisilele ngokupheleleyo, kwathiwa inkampani ayikaze ibe nezicwangciso zokuyazisa le fowuni kwintengiso. Ukusukela kule meko, bekufuneka ube nengqokelela ye-99% ukuze iveliswe.
Kodwa kuya kufuneka ubenemiba efana noyilo lwefowuni. Uhlobo lwentengiso luhlala lubhengeza indlela elinelunda ngayo ngesi sixhobo. Ifowuni enebhetri enkulu, ebizelwe ukwenza ngokutsha. Kodwa ubukhulu bayo ibiyinto ethintele kakhulu amathuba okuphumelela. Kwimakethi yanamhlanje, apho siqhele khona iifowuni ezincinci, le modeli ye-Energizer ayinandawo kwintengiso. Ityebile kakhulu kwaye ayonwabanga ukuyiphatha epokothweni yebhulukhwe.
Inkampani ikuvumile ukusilela kwephulo kwiposti yalo e-Indiegogo. Bafuna ukubulela abasebenzisi abaye bathatha inxaxheba kuyo ngenxa yokuthembela kwabo abakubeke kwifowuni. Kwangelo xesha, bayangqina ukuba bangabo usebenza ekwenzeni uphuculo loyilo Kwisixhobo. Ke kubonakala ngathi asikayiva yonke into malunga ne-Energizer Power Max P18K Pop kwimarike. Nangona singazi ukuba inkampani inezicwangciso zokuphehlelela iphulo elitsha kwiinyanga ezimbalwa, okanye ukuba ekugqibeleni iya kuba nokuqaliswa kwesiqhelo, ukuba kunjalo.
Isimanga se-Energizer kwi-MWC 2019 ngefowuni esongekileyo ngexabiso eliphantsi
Sinethemba lokuva ngakumbi malunga nezicwangciso zakho kungekudala.. Isixhobo esinobungozi kwaye sinomdla, kodwa ekunokwenzeka ukuba asinandawo kwintengiso ye-Android namhlanje. Ucinga ntoni ngale fowuni kunye nokusilela kwayo? Ngaba ungayithenga ifowuni yolu hlobo?
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Ifowuni ye-Energizer ene-18.000 mAh ibhetri yiflop kwi-Indiegogo
IXiaomi Mi MIX 3 5G isungulwe ngokusemthethweni eYurophu